WhyNotWin11: ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည် ၀ င်းဒိုး ၁၁ နှင့်ကိုက်ညီလျှင်အတည်ပြုရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများဟုတ်မဟုတ် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ standby mode မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများနှင့်အတူ နှစ်ချက် Booting နှင့် Windows ကို7သို့မဟုတ် Windows 10, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် Windows ကိုမည်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များသည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာများကိုသင့်တော်သည်၊ မသင့်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများကိုစစ်ဆေးရန်လုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစွာကူညီနိုင်သည်ကိုသိရခြင်းကကောင်းသည် ရွှေ့ပြောင်း အသစ်သို့ Windows ကို 11.
သေချာပါတယ်၊ Microsoft က သူ၌သူ့ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ကိရိယာရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့သုံးနိုင်တယ် အခမဲ့သို့မဟုတ်ပွင့်လင်း tools တွေကို ပေါ်မှာဤနှင့်အခြားအလုပ်အတွက် Windows, MacOS သို့မဟုတ် GNU / Linux ကောင်းကောင်းတောင်မှပိုကောင်း။ ထိုအတိအကျကိုခေါ်လျှောက်လွှာ၏အမှုဖြစ်ပါတယ် "WhyNotWin11".
နည်းပညာဝါသနာရှင်များစွာကသိထားနှင့်ပြီးသားများ၊ Windows ကို 11 နှင့်အတူကွန်ပျူတာများ၏မဖြစ်မနေသဘောသဘာဝနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် TPM နည်းပညာ။ ဒီထက်ပိုပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပေးတဲ့ applications တွေကိုအသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတယ် "WhyNotWin11".
ထို့ကြောင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလိုသူများအတွက် TPM နည်းပညာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုနှင့်အောက်ဖော်ပြပါအလားတူ application များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသူများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် Windows အတွက်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်:
"TPM (Trusted Platform Module) သည်ကွန်ပျူတာချစ်ပ် (microcontroller) ဖြစ်ပြီးပလက်ဖောင်း (သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့) အားစစ်မှန်ကြောင်းပြသရန်အသုံးပြုသောအပိုပစ္စည်းများကိုလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထိုအပိုပစ္စည်းများတွင်စကားဝှက်များ၊ လက်မှတ်များသို့မဟုတ်စာဝှက်စနစ်သော့များပါဝင်နိုင်သည်။" TPM: ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်း module အကြောင်းအရာအားလုံး။ ၎င်းကို Linux တွင်အသုံးပြုသည်။
MS PowerToys - ၀ င်းဒိုး ၁၀ သုံးစွဲသူများအတွက်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်
1.1 WhyNotWin11 ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ Developer အရသိရသည် GitHub တရားဝင်ဆိုဒ်, "WhyNotWin11" ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
"သင်၏ကွန်ပျူတာသည် Windows 11 ဗားရှင်းအတွက်အဘယ်ကြောင့်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။"
ဒါက "WhyNotWin11" ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ (desktop (သို့) လက်တော့) သည် Windows 11 ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်၊ မနိုင်စစ်ဆေးနိုင်အောင် open source software tool (application) ဖြစ်သည်။ လေးစားမှုနှင့်အတူ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးကိရိယာ (PC ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု)ကွန်ပျူတာသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်မည်သို့မဟုတ်မလည်ပတ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည် Windows ကို 11.
ထိုအဘို့, ကပစ္စည်းကိရိယာများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ် ဘာကြောင့် Windows 11 ကိုမထောက်ပံ့တာလဲပြသနာရှိသည့် system hardware အားလုံးကိုစာရင်းတစ်ခုပေးခြင်း။
၏အထင်ရှားဆုံး features တွေထဲမှာ "WhyNotWin11"မူရင်းမိုက်ခရိုဆော့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊
ပိုကောင်းတဲ့ Graphical User Interface (GUI) ။
ရလဒ်များကိုအရောင်များနှင့်ပြသပါ။ "yes" အတွက်အစိမ်းရောင်အရောင်၊ "no" အတွက်အနီရောင်နှင့် "မသေချာ" အတွက်အဝါရောင်အရောင်ဖြစ်ခြင်း။
အခြားပစ္စည်းများအကြား CPU အမျိုးအစား၊ TPM ဗားရှင်း၊ RAM ပမာဏနှင့် BIOS စသည့်နေရာအားလုံးတွင်ဟာ့ဒ်ဝဲသဟဇာတဖြစ်မှုကိုစစ်ဆေးသည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - ကွန်ပျူတာဟာဟာ့ဒ်ဝဲအများစုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခါ Windows ကို 11, အများဆုံးဖွယ်ရှိပေါ်မှာပေါ်မှာတူညီတဲ့၏ installation ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော် "WhyNotWin11" များစွာသောကိုအထောက်အပံ့မပေးသောရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော hardware အသေးစိတ်များကိုပြုပြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
download ရယူရန်အတွက်သင်သည်အောက်ပါကိုရယူနိုင်သည် link ကို နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သော installer ကိုရယူပါ ".exe" ပုံစံ။ သူကလက်ရှိသူ့အဘို့အသွားနေသည် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအရေအတွက်က 2.3.0.5, ရက်အနည်းငယ်အကြာဖြန့်ချိခဲ့သည်။
installer ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ငါ့၌ အစစ်အမှန်အသုံးပြုမှုကိစ္စapp ကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ interface တန်ဖိုးများအားလုံးအပြည့်အ ၀ မွမ်းမံသည်အထိ၎င်းကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။
ဤရွေ့ကား, အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည် "WhyNotWin11" ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ တိုတိုအတွက်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်မှပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့မသင့်တော်သည် Windows ကို 11.
ငါ့အမှုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝအရေးမပါသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၏အချိန် ၉၉% သည်ကျွန်ုပ်perfectlyုံကောင်းမွန်စွာသုံးစွဲသည် GNU / Linux များငါ့ကိုယ်ပိုင်သုံးပြီးဖွံ့ဖြိုး MX Linux ကို 19 respin ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာပိုမိုမြင့်မားပါသည် GNU / Linux များ က Windows ကို 10.
ဒါ: "၀ င်းဒိုး ၁၁ ဟာမင်းမသွားဘူးလို့ဝတ်မထားဘူး".
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်း ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် app ကို ခေါ်ဆိုခ «WhyNotWin11»ရည်ရွယ်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် software ကိုစမ်းသပ်လွယ်ကူချောမွေ့ တပ်ဆင်ရန်မသင့်၊ မသင့်ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကို Windows ကို 11; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » WhyNotWin11: ကျွန်ုပ်တို့၏ PC သည် ၀ င်းဒိုး ၁၁ နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် App
Ultimaker Cura 4.10 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်